Maydka Robert Mugabe Oo La Keenay Caasimada Harare Ee Zimbabwe
Maydka madaxwaynahii hore ee Zimbabwe Robert Mugabi. Ayaa soo gaarey dalkaas kadib markii laga soo duuliyay dalka Singapore oo uu ku geeriyooday todobaadkan horaantiisii.
Kumanaan taageerayaal iyo xubno ka tirsan qoyskiisa iyo masuuliyiin ka tirsan dawlada. Kuwaas ayaa is taxay wadooyinka halbawlaha ah ee dalkaas ee maydka Mugabi la soo mariyay si ay xushmad ugu muujiyaan.
Ciidamada qalabka sida. Ayaa galbinayay qafiska uu maydka Mugaabi ku jiray. Halkaas oo lagu daday calanka ka kooban midabyada kala ah Cagaarka. Dahabiga iyo madawga ee dalkaasi Zimbabwe.
Haweenayda uu dhaxdey. Madaxawaynahan ee Greece Mugabi ayaa iyaduna maydka la socodatay. Markii dambana waxa ay ag fadhisatey. Madaxwayne Emmerson Mnangagwa oo ay mudo dheer ahaayeen kuwo awooda dalkaas ku loolamaya.
Maydka Mugabe ayaa caawa u hoyan doona guri uu ku leeyahay Caasimada Harare oo loo yaqaan Blue Roof, waxana maanlinta bari ah ee khamiista ah la dhigi doonaa garoonka kubada cagta ee Rufaro stadium oo ay dadku ku soo booqan doonaan si ay xushmad ugu muujiyaan, ka hor inta aan loo qaadin degaankii uu dhashay ee Zvimba oo lagu aasi doono.
Madaxwaynaha Shiinaha Xi Jinping, Madaxwaynahii hore ee Cuba Raul Castro iyo madaxwaynayaal badan oo African ah oo uu ku jiro Madaxwaynaha South Africa Cyril Ramaphosa, ayaa la filayaa inay ka soo qayb galaan aaska Mugabe maalinta sabtida ah sida uu sheegay Madaxwaynaha dalkaasi Zimbabwe.